ကစားသမား ဘဝ တလျှောက် ရင်ဆိုင်ရ အခက်ခဲဆုံး ပရီးမီးယားလိဂ် ပြိုင်ဖက် ကွင်းလယ်လူ ၂ဦး ရဲ့ အမည် ကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်တဲ့ #အက်ဆီယန် - SPORTS MYANMAR
ကစားသမား ဘဝ တလျှောက် ရင်ဆိုင်ရ အခက်ခဲဆုံး ပရီးမီးယားလိဂ် ပြိုင်ဖက် ကွင်းလယ်လူ ၂ဦး ရဲ့ အမည် ကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်တဲ့ #အက်ဆီယန်
May 22, 2020 May 22, 2020 - by Editor
၂၀၀၅ ခုနှစ် ၊ နွေရာသီ အပြောင်းအရွှေ့ ဈေးကွက် အတွင်း မှာ ဂါနာ လက်ရွေးစင် ကွင်းလယ်လူ မိုက်ကယ် အက်ဆီယန် ဟာ ပြင်သစ် လီဂူးဝမ်း ကလပ် လိုင်ယွန် အသင်းကနေပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်ချယ်လ်ဆီးအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် အက်ဆီယန်ဟာယင်းလန်ဒန်ကလပ်မှာ၇ရာသီကြာကစားခဲ့ပါတယ် ။
ဒီ အတွက်ကြောင့် ပရီးမီးယားလိဂ် ၇နှစ်ကြာ ကစားခဲ့ပြီး အဲ့ဒီ အတောအတွင်း မှာလည်း အက်ဆီယန် ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် ဖလား ၂ကြိမ် ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် ပရီးမီးယားလိဂ် ရဲ့တကယ့်ကွင်းလယ်အကျော်အမော်တွေကိုအက်ဆီယန် တယောက် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရဖူးပါတယ် ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်း က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Instagram Live အင်တာဗျူး တခုမှာတော့ ဘယ် ပရီးမီးယားလိဂ် ပြိုင်ဖက် ကွင်းလယ်လူ တွေက ၎င်းရဲ့ ကစားသမား ဘဝ မှာ ရင်ဆိုင်ရ အခက်ခဲဆဲုးလဲ ဆိုတဲ့ အမေး အပေါ် အက်ဆီယန် က အခုလိုပဲ ဖြေကြား ပေးခဲ့ပါတယ် ။
အက်ဆီယန် က ” ကျွန်တော့ အတွက် အခက်ခဲဆုံး ပြိုင်ဖက် ကွင်းလယ်လူ လို့ဆိုရင် စတီဗင် ဂျရတ် နဲ့ ပေါလ်စခိုးလ် တို့ကို အမြဲတမ်း ရွေးချယ် ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါကို ကျွန်တော် အရိုးသားဆုံး ဝန်ခံတာပါ ။ သူတို့ ၂ယောက်လုံး ဟာ ရင်ဆိုင်ရ အရမ်း ခက်တဲ့သူ တွေ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဘောလုံး အထိန်းအသိမ်း ၊ နည်းစနစ် တွေ ကောင်းရုံသာမက ၊ ဘောလုံး ဖျက်ထုတ်ရာမှာလည်း အရမ်း ကြမ်းတမ်းသူတွေပါ ။ “
” နောက်ပြီး ၂ယောက်လုံး ဟာ အရမ်း သန်မာတဲ့ ကွင်းလယ်လူ တွေ ဖြစ်ပါတယ် ။ သူတို့ ၂ယောက်လုံး ဟာ ရင်ဆိုင်ရ အရမ်းခက်ခဲတဲ့ကွင်းလယ်လူတွေဖြစ်ပေမယ့်၊ အဲ့ဒီတုန်း ကတည်းက ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲတွေကအတော်လေးကစားရခက်ပါတယ် ။ ဘယ် အသင်း နဲ့ပဲ ရင်ဆိုင်ရပါစေ ၊ ခက်ခဲတဲ့ ပြိုင်ဖက် ကစားသမား တွေနဲ့ အမြဲ ရင်ဆိုင်ရပါတယ် ။ ” လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ။
အက်ဆီယန် ဟာ ဂျရတ် ကို သူ့ရဲ့ ရင်ဆိုင်ရ အခက်ခဲဆုံး ပြိုင်ဖက် ကွင်းလယ်လူ တဦး အဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့သလို ၊ တဖက်မှာ သူ ကိုယ်တိုင် လီဗာပူး အသင်း ကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့၊စတီဗင်ဂျရတ်နဲ့တသင်းတည်းတူတူကစားရဖို့အရမ်းနီးစပ်ခဲ့ပါသေးတယ် ။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်အပြောင်းအရွှေ့မှာလီဗာပူးကိုသူပြောင်းရွှေ့ဖို့ဘယ်လောက်ထိ နီးစပ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်း လည်း အခုလို ပြောပြခဲ့ပါတယ် ။
အက်ဆီယန် က ” ဘတ်စတီယာ အသင်း မှာ ရှိနေစဉ် က ကျွန်တော် ဟာ အခြား ဥရောပ ထိပ်သီး ကလပ် တွေရဲ့ ကမ်းလှမ်းမှု များစွာ ကို ရရှိခဲ့ဖူးပါတယ် ။ ဂျရတ် ဟူလီယာ လီဗာပူး ကို ကိုင်တွယ်ခဲ့စဉ် က လီဗာပူး ကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့ အရမ်း နီးစပ်ခဲ့ပါတယ် ။ သူတို့ အသင်း နည်းပြ နဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ အတွက် မဲလ်ဝုဒ် ကိုတောင် ကျွန်တော် ရောက်ခဲ့ပါသေးတယ် ။ “
” ကျွန်တော် တို့ အပြောင်းအရွှေ့ အတွက် ဆွေးနွေးမှု တချို့ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် ကျွန်တော် ပြင်သစ် ကို ပြန်လာခဲ့ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် နောက်ထပ် ကမ်းလှမ်းမှု တွေကတော့ ဆက်ပြီး ရောက်လာခဲ့ပါတယ် ။ ပီအက်စ်ဂျီ ၊ မာဆေးလ် စတဲ့ အသင်း တွေ ဆီကပါ ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ဟာ ဘတ်စတီယာ အသင်း တာဝန်ရှိသူ တွေကို အသင်း မပြောင်းချင်သေးဘူး လို့ ပြောခဲ့ပါတယ် ။ “
” သူတို့ဖက်ကလည်း ကျွန်တော့ ကို မရောင်းချချင်ခဲ့ပါဘူး ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော့ ကို ဘတ်စတီယာ မှာ နောက်ထပ် တနှစ် ဆက်နေစေချင်သေးလို့ပါ ။ နောက်တနှစ် ထပ်ကစားပေးဖို့ က ကျွန်တော့ အတွက် ပြဿနာ လုံးဝ မရှိခဲ့ပါဘူး ။ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လည်း အဲ့ဒီတုန်း က ဘတ်စတီယာ အသင်း ကို မစွန့်ခွာချင်သေးဘူးလေ ။ “
” ဒါနဲ့ပဲ ကျွန်တော် လည်း အဲ့ဒီ နှစ်မှာ အသင်း မပြောင်းဖြစ်ခဲ့ပါဘူး ။ ဒါဟာ ကျွန်တော့ ရဲ့ ဘတ်စတီယာ အသင်း နဲ့ တတိယမြောက် ရာသီ ဖြစ်ပါတယ် ။ အရှေ့မှာ ကျွန်တော် ပြောခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့ ကို ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စားခဲ့ဖူးတဲ့ ကလပ် ၃သင်း အထဲကို လိုင်ယွန် အသင်း လည်း ထပ်မံ ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ် ။ “
” နောက်ပြီး ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် ကလည်း အင်္ဂလန် ကို ပြောင်းရွှေ့ ကစားဖို့ အရမ်း စောလွန်းတယ် လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခံစားခဲ့ရပါတယ် ။ ဒါကြောင့်မို့ လီဗာပူး ထက် လိုင်ယွန် ကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့ ရွေးချယ်ခဲ့ရတာပါ ။ ပြီးမှ ကျွန်တော် ဟာ ဟိုဆေး မော်ရင်ဟို ကိုင်တွယ်ခဲ့တဲ့ ချယ်လ်ဆီး အသင်း ကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ” လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ။
မိမိ အားအသန်ဆုံး နဲ့ အကောင်းဆုံး ကစားပေးနိုင်မယ့် နေရာကို ချဲလ်ဆီး ပရိသတ်တွေ အတွက် အသိပေးလာတဲ့ #ဟာဗက်ဇ်
တီယာဂို အယ်ကန်တာရာ ၊ ဝိုင်နယ်ဒန် တို့နဲ့ ပက်သက်တဲ့ အပြောင်းအရွေ့ သတင်းတွေ အပေါ် မှတ်ချက်ပေးလိုက်တဲ့ ယာဂန်ကလော့
ပရိသတ်တွေ သိလိုကြတဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ကဏ္ဍ အကြောင်းတွေကို ဖွင့်ဟလိုက်တဲ့ ဆိုးလ်ရှား
စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းလာတဲ့ အီတလီက ၃ ပွင့်ဆိုင် ဇာတ်လမ်း ၊ ရိုဒရီဂွက် ကို ဖရီးရလိုက်တဲ့ အဲဗာတန် တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
September 18, 2020 - by Editor
ဘာစီလိုနာ တိုက်စစ်မှူးကြီး လူးဝစ် ဆွာရက် ဟာ အီတလီ ဘာသာ စာမေးပွဲ ကို ယမန်နေ့က အောင်မြင် ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် အီတလီ ကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့ အတွက် စာရွက် စာတမ်း ကိစ္စတွေ တော့ မပြီးပြတ် ပေး ပါဘူး ။ ဒီ အချိန် မှာ …
၆ ပွဲအထိ ပယ်ခံလိုက်ရသူ နဲ့ . . . PSG – မာဆေး ရန်ပွဲ က အပြစ်ဒဏ်များ
စပါး နဲ့ အနာဂါတ် မရှိတော့တဲ့ ကွင်းလယ်လူ ၊ ဘာကာအတွက် ဂိုးစသွင်းတဲ့ မက်ဆီ တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
ပရိသတ်တွေ ကို ပြန်လည် ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုခွင့် ပေးတော့မယ့် ဘွန်ဒက်လီဂါ
နောက်ထပ်ပစ်မှတ်တစ်ခု လက်လွှတ်ရတော့မယ့် ယူနိုက်တက် ၊ အနာဂါတ် ကို စဉ်းစားလာတဲ့ ချဲလ်ဆီး လူငယ် တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
အသက် ၂၁ နှစ် အရွယ် ၊ ဂျာမနီ လက်ရွေးစင် ကွင်းလယ် တိုက်စစ် ကြယ်ပွင့် ကစားသမား ကိုင်ဟာဗက်ဇ် ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ် ၂ပတ်လောက် ကပဲ ဘွန်ဒက်စ်လီဂါ ကလပ် လေဗာကူဆင် အသင်း ကနေ ပရီးမီးယားလိဂ် ထိပ်သီး ကလပ် ချဲလ်ဆီး အသင်း သို့ ယူရိုသန်း ၇၀ …